Askarta Dowlada Federaalka Oo Suuqa Bakaaraha Dhac Ka Geystay. – Calamada.com
Askarta Dowlada Federaalka Oo Suuqa Bakaaraha Dhac Ka Geystay.
Saacadihii lasoo dhaafay waxey maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka dhac baahsan ka geysteen gooba ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Goobaha ganacsi ee ay boobeen maleeshiyaatka dowlada federaalka ayaa ku yaala agagaarka Carwo Leymuun ee suuqa Bakaaraha’waxeyna goobahaasi ganacsi maleeshiyaatka Murtadiinta kala baxeen lacago isugu jirta doolar iyo shilin Somali.
Inta la xaqiijiyay askarta dowlada federaalka waxey goobahaasi kala baxeen lacag dhan Saddex iyo Toban Milyan ShilinÂ Somali ah’waxey sidoo kale dhaceen lacag doolar ah oo gaareysa Kun iyo Labo Boqol oo doolarka Mareykanka ah.
Dhacan baahsan ee maleeshiyaatka dowlada federaalka ka geysteen suuqa Bakaaraha ayaa kusoo aadeysa xilli dowlada federaalka bandow kusoo rogtay magaalada Muqdisho’iyadoona maalinta doorashada ay dhaceysa iyo maalinta ka horeysa gabi ahaan Kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaatka dowlada federaalka ay xirayaan wadooyinka magaalada Muqdisho’sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha dowlada federaalka ugu magacaaban gobalka Banaadir.
Previous: Dhageyso+Akhriso Abwaan Cabdullaahi Somali Iyo Gabayga Kulbiyow.
Next: Dhageyso Daryeel La’aanta Heysata Dhaawacyada Askarta Puntland.